« Hanome anareo ny ainay »
Vakio ny 1 Tes. 2:6-8. Inona ny zavatra ambaran'i Paôly izay azontsika aseho ary tokony ho hita taratra eo amin'ny sekoly sy ny fiangonantsika?
Eo anatrehan'ny fitotonganana sy ny faharavan'ny fiarahamonina ankehitriny dia velona amin'ny fotoana izay maha-zava-dehibe ny fampianaran'ny Baiboly mikasika ny fiangonana indrindra isika. Araka izay ampahatsiahivan'i Mat. 18:20: "Fa na aiza na aiza no iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako, dia ao afovoany Aho". Tany an-tokantranon'ny mpino no niandohan'ny fiangonana sy ny fiarahamonin'ny mpino tamin'ny andron'ny TV. Tany no toerana nihaonan'ny fiarahamonin'ny mpino tao amin'ny tarika madinika, nivavahan'izy ireo sy nihirany ary nanaovany ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo, ary koa nianarany sy nifampizarany ny tenin'i Jesôsy.
Ireo tarika niara-nivavaka ireo ihany koa no tonga sekoly voalohan'ny fiangonana; tao mantsy no toerana nampianarana azy voalohany ny Baiboly sy ny fiainana vaovao ananany ao amin'i Jesôsy . Ny teny nosoratan'i Paoly, tahaka ny Rôm. 12:2: "Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina" dia manoro hevitra ny handraisan'ny fiangonana amim-pahamatorana indrindra ny asa fanabeazana.
Tsy ela dia hitan'ireo mpino voalohany ireo fa ny fiarahamonina no toerana mety indrindra iainana ny filazantsara. Azontsika atao ny mihira mafy kokoa ao anaty ao, mivavaka amin-kafanam-po bebe kokoa, ary mihevitra ny hafa sy maneho fangorahana kokoa. Rehefa mandre ny hafa miresaka momba ny fahatsaran'Andriamanitra isika dia mahatsapa ny fahatsarany amintsika koa; rehefa mandre ny amin'ny tolona atrehan'ny hafa sy ny fahoriany isika dia mahatsapa ny fanasitranan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ary mahatsapa indray ny faniriana ho tonga fitaovana hampita ny fahasoavany sy ny fanasitranany.
Ambaran'i Paoly ao amin'ny toko sy andininy nodinihina androany fa ny filazantsaran'Andriamanitra dia mahafaoka ireto rehetra ireto: ny herin'ny hazo fijaliana, ny fananganana ny Tompo tamin'ny maty ary ny fampanantenana ny amin'ny fiaviany indray. Tsy misy vaovao mahafinaritra noho izany manerana izao tontolo izao, ary nanokana ny androm-piainany manontolo ho amin'ny fihaikana iray ataony lohalaharana i Paoly, dia ny hizara ny tantaran'i Jesôsy amin'ny fahitsiana sy fanoloran-tena lehibe.
Ambaran'i Paoly etoana fa ny fomba tsara indrindra hahatakarana ny hafatry ny filazantsara dia ny fizarana izany amin'ny hafa sy ny fiaraha-miaina amin'izy ireo. Aoka tsy hohadinointsika mihitsy fa mandinika akaiky dia akaiky antsika ny olona, mba hahitany raha toa maneho taratra ny hafa-pahasoavana hita ao amin'ny Baiboly ny fiainantsika. Saino lalina ny momba ny fiainanao, ary anontanio ny tenanao hoe: "Vavolombelona toy ny ahoana aho eo anatrehan'ireo manodidina ahy?"